Khabiir soo Bandhigay 10 Su’aalood oo Somaliland ka mid Tahay oo Wejigabax ku ah Socdaalka Farmaajo ee Maraykanka | Dhaymoole News
September 26, 2019 - Written by wariye999
Michael Rubin oo ah aqoonyahan ka tirsan machadka American Enterprise Institute, isla markaana hore uga soo shaqeeyey Wasaaradda Gaashaan-dhiga Maraykanka, ayaa soo bandhigay Toban Su’aalood oo weji-gabax ku noqonaya Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, kuwaaasi oo ay tahay inuu ka jawaabo inta uu ku sugan yahay dalka Maraykanka oo uu kaga qaybgalay S
Waxa korodhay deeqaha la siiyo sannad kasta Soomaaliya oo gaadhay balaayiin doolar. Hase yeeshee Hay’adda Transparency International waxay Soomaaliya ku derajeysay inay tahay dalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka, iyadoo xataa sagxadda ka sii xigta dalalka Syria, Iraq, Venezuela, Yemen iyo Afghanistan.
Miyaad rumaysan tahay in qiimeynta Transparency International ay khalad tahay? Haddii ay jawaabtu sidaas tahay. Miyaanay arrinta musuqmaasuqu tibaaxaynin in Soomaaliya aanay awood u laheyn ay ku maamusho deeqaha la siiyo? Sidoo kale maxay cashuur bixiyeyaasha Maraykanku ay Muqdisho ugu dirayaan Malaayiin doolar oo inteeda badan la leexsado isla markaana khasaare ah?
Alshabaab waxay farobaas ku hayaan Muqdisho, Kismaayo iyo meelo kale oo Soomaaliya ka tirsan oo ay si bile ah weerraro uga geystaan, miyaad na tusi kartaa meel aad horumar ka sameyseen?
Sidoo kale, miyay Dawladda Soomaaliya ku filan tahay inay hanato ammaanka, haddii ciidammada AMISOM ay yareeyaan joogitaankooda Soomaaliya?
4 Xuquuqda Aadanaha (Human Rights)
Miyaad ka sifeyn kartaa wanaagga iyo galdaloolooyinka dastuurka Soomaaliya? Tan iyo markii aad talada qabatay waxa dhacay dilal badan oo lagu khaarajiyey dadka mucaaridka ka tirsan, halka in badan oo kalena xabsiga la dhigay.
hirweynaha loo dhan yahay ee Qarammada Midoobay.